abadlali abaningi bayawazi iqiniso lokuthi "League of Legends" - kungcono neze umdlalo wonke umuntu. Iqiniso ukuthi kakhulu ukuthi okuningi kuncike endleleni ufuna "ukwakha" uhlamvu yabo kakhulu, indlela ukuthuthukisa amakhono ayo, ehlezi phandle amahora for izimpi efanayo. Lona umnyombo walokho enkundleni - lapha umdlalo ngamunye ihlala phakathi amahora eyodwa futhi ezimbili, futhi kuhlanganisa umjikelezo ogcwele ukuthuthukiswa hero, okungukuthi, ukuthi uzokwazi ukuthola ngaphambi ngamagama ashubile uma anqikaze ngisho okwesikhashana. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuba bakwazi ukukhetha uhlamvu ukuthi uzoyithanda, ukuze ukwazi kalula ukuthuthukisa ke, ukwazi konke emandla nobuthakathaka bakhe siqu, ukuqonda onjani Yakha kungcono ukwenza esimweni esithile. Ngokwesibonelo, singakwazi ukuthatha Jax - lena uhlamvu enamandla kakhulu, kodwa ngaphandle ukuqeqeshwa efanele kanye nolwazi okufanele ngakho ngeke aphumelele. Futhi uma ungafuni ukuchitha omningi isikhathi sizama ukufunda yonke amakhono umlingisi ngamunye, ungasiza lo mhlahlandlela. Jax - uhlamvu ukuthi idinga siziqonde ngokuphelele ngamunye ikhono lakhe, kanye abeka kanjani ndawonye. Ngakho-ke, ukufunda ngokucophelela ulwazi okuzoxoxwa ngezansi, ukuze uqonde kangcono iqhawe. Lokhu akusho ukuthi, kokuba bafundelwa "LOL" Umhlahlandlela, Jax, uzokwazi ukuphatha ngaphandle inkinga kancane. Prakthiza kubaluleke kakhulu, umuzwa hero, ulwazi theory nje kuphela kodwa futhi nekhono silisebenzise umkhuba.
Ngakho, ikhono kuqala ngokuvamile abalingiswa Passive, ie, ukupela ukuthi awudingi ukusebenzisa - ke bekulokhu esebenzayo futhi esebenzayo ngaphandle kokuhlanganyela kwakho. Nale ukupela kanye ukuqala "LOL" -gayd. Jax has ikhono kwandisa umonakalo futhi ukuhlasela isivinini - impela kancane, kodwa namanje lubonakale. Awunayo siwathathe kancane leli khono, njengoba abadlali abaningi imfundamakhwela ukubona ukuthi ekuqaleni lapho kuqondiswa angaqondakali akusebenzi. Uma uthanda kumelwe sophiswe ke maphakathi umdlalo uzophawula indlela Inkomba yakho anda yomonakalo ngomzuzwana. Futhi lolu hlobo game, ngisho lezizinto Ungadlala indima ebalulekile zonke eliphikisayo, okuzokwenza iqhaza League of Legends Jax. Hyde Yilesisizathu futhi kukhona - ke kungase kubonakale sengathi uhlamvu kahle elula ngenxa ezibalweni zayo okusezingeni eliphezulu kokuqala namakhono enamandla esikhathini eside. Kodwa udinga ukuqonda ukuthi abasakwazi, ungakwazi ngokuphelele ababhubhise inzuzo yabo, ngisho iqhawe weakest ephethwe ungumdlali onekhono, awunankinga wena waqonda.
Hyde Jax ikutshela mayelana ngamunye amakhono kungatholakali kule iqhawe. Futhi itholakale kuqala for uzotshala amakhono iyasebenza, okuyinto Ukweqa ibanga kude. Sicela uqaphele ukuthi ngokuyinhloko asetshenziswa ukuze sifinyelele kwi isitha ukuhlasela ngayo umonakalo owengeziwe. Nokho, kudingeka sikhumbule njalo ukuthi "LOL" - umdlalo ongayikuswela kunoma yiliphi icala akufanele zithembele kuphela ukuba abangele punches amaningi ngangokunokwenzeka. Iqiniso ukuthi futhi udinga ukucabanga ngokunengqondo, ukusebenzisa izikimu Tactical ezikuvumela ukwenza okukhulu kunalokhu. Phela, leli khono ungase futhi nigxumagxume ku namadlelandawonye, ngaleyo ndlela uyahoxa isimo sasibonakala singathembisi. Ngaphezu kwalokho, ikhono ingasetshenziswa Emawadini kukunika ithuba ukuhamba ngokushesha futhi kalula, ngisho nalapho abanye abakwazi ukuya. Njengoba ubona isiqondiso Jax kungaba ngawe ewusizo kakhulu kunawe ekuqaleni wacabanga.
Uma utadisha umhlahlandlela Jax, ungabese ukudida oda amakhono - bona zitholakala kuphela njengoba avele umdlalo. Vele kanzima kakhulu lo mdlalo ukugqamisa noma yiliphi ikhono ukuthi kungaba emhlabeni omuhle futhi ngemsebenti ukunakekelwa okukhethekile. Ngokwesibonelo, leli khono akakwazi ngokuthi nje zikusize kwaba ngaphambili. Kodwa kunezimo lapho iyasiza kuwe - ngokuba nalo ungashaja isikhali sakho ukuze igalelo elilandelayo wasishaya Umphikisi ungakanani umonakalo esithé ukuphakama. Ngakho uma ufika nje bazijabulise ke ukusetshenziswa leli khono ezizoba usizo kakhulu. ilokho lifundisa umhlahlandlela Jax - kule game futhi uhlamvu akanawo amakhono ukuthi awadingekile nhlobo.
Ujwayele Ungase uke wezwa ukuthi inkinga esiyinhloko Melee abalingiswa kule mdlalo "League of Legends" - Jax. Hyde ongakabi wakhuluma lokhu, kodwa isikhathi sesifikile, njengoba sasiqhubeka ukhuluma ngani nje amakhono. Iqiniso liwukuthi uma usebenzisa uhlamvu yakho uyakwazi Dodge zonke okuzenzakalelayo ukuhlaselwa nabaphikisi, ikwenze amasekhondi amabili ezingeni lokuqala - futhi kuphela by buhlungu obunamandla bokuthi stuns isitha. Njengoba ubona, lokhu kuyikhono kungaba kuyinkinga real, ngoba amathangi kuvame behlaselwa auto kuhlasela, and Jax singadambisa kubo linye likhono. Nalapha futhi, uma ufunda ukuyisebenzisa isikhathi, khona-ke asesabi elwa omakhelwane (ikakhulukazi uma sicabangela iqiniso lokuthi ungahlala eyodwa gxuma).
Ungase Grandmaster sika
Futhi-ke, ingasaphathwa ukuhlaselwa ekhethekile ukuthi ngamunye izinhlamvu inegama ezivamile "yesilawuli kude". Isici esiyinhloko lolu Ulta ukuthi izenzo zibukele, kukho konke ukuhlaselwa lwesithathu uhlamvu ngcono nani elihlaba umxhwele amaphuzu. Kodwa akugcini lapho, ngoba kukhona amakhono futhi liyingxenye ematasa - ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuyisebenzisa, iqhawe lakho uthola isikhashana anda ukuzivikela ngokomzimba futhi magic ukumelana.
I Yakha main
Okokuqala nje kubalulekile ukucabangela a Yakha eyisisekelo yaleli uhlamvu, wazifunga yena, lokhu kuyoba ephumelela kunazo. Ngakho, ikhono kuqala ukuthi udinga ukumpompa - kuyinto Counter Strike, wena abese ekhohlwa yiso kuze eduze kokuphela, kuhle, futhi ezingeni lokuqala. Awu, bese sigxila ukunakwa ikhono kuqala ukuthi ngezikhathi unezela amaphuzu owesibili uzotshala yesilawuli kude ngemuva nje kokuthi izimo sezivuma. lokhu kuzoqinisekisa wena ukwakha ukudonsa elinokuthula nelilondekile ayeqiniseka ngayo, futhi uzokwazi ukuba simelane izitha emgwaqeni ophahlwe yizindlu kusukela amazinga kuqala leli khono. Kodwa kukhona esinye Yakha ukuthi ungakwazi ukunikeza umhlahlandlela - Jax-wehlathi.
Hyde ku Jax-wehlathi kuyoba ukuhluka njengoba umlingisi kule indima, kunezinye izinselele kanye nokukhathazeka kwabo. Lokhu kusho ukuthi amakhono lokuqala ngeke kudingeke kakhulu - kufanele akhethe ukuthi ukugxila wesibili noma ngowesithathu, njengoba wehlathi, bayoba ewusizo kakhulu engxenyeni yokuqala the game. Ngokwemvelo, ikhono kuqala akudingekile ukuba baphonse nhlobo - endaweni ethile phezu Level yesibili udinga ukumpompa okungenani eyodwa ezingeni ohlangothini oluphephile kodwa umsebenzi ehlathini angadingi gxuma - uzodinga ukugcwalisa ngokushesha isipiliyoni, futhi lokhu ephelele noma yesibili noma amakhono lwesithathu.
Indlela yokuthola njengentelezi Goldura mdlalo "Skyrim". Ukudlula imfuno "Legend Forbidden"
Incazelo yalo mdlalo i-The Sims 3: Deluxe edition
Amasu aphambili le "Android": 10 eziphezulu
Dead Rising 3: Impendulo. Sibutsetelo umdlalo Dead Rising 3
Indlela ukufaka mod ukuze Minecraft - incazelo eningiliziwe
Chile: izikhangibavakashi, isithombe, ukubuyekezwa
Khona-ke abatshalwé evulekile phansi squash? I kokumethemba engcono
Welders MMA: izingcezu, umsebenzi izincazelo, imiyalelo imisebenzi Ukuvikelwa zabasebenzi
Manuel Neuer: ukuphila nomsebenzi we unozinti enkulu yesimanjemanje
A nongenza kubo bonke: isiketi ipensela nge okhalweni okusezingeni eliphezulu.